Iran: Fitokonan’ny bisy sy ireo bilaogera tany Israely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2018 4:13 GMT
Niezaka nitarika fitokonana ny mpamily bisy Iraniana mba hanatsarana kokoa ny fepetran'ny asa sy ny famotsorana ny mpitarika ny sendikan'izy ireo. Bilaogy fitantarana hetsika iray, Otobos1 (midika hoe bisy amin'ny teny Persiana ny Otobos), dia noforonin'ny mpanohana ny sendikan'ny bisy mba hitantarana vaovao momba ny fitokonana. Nangataka ny hafa, anisan'izany ireo bilaogera Iraniana mba hanohana ny fitokonana ary hampahafantatra ny olona ny zavatra mitranga ny Otobos1. Araka ny voalazan'i Otobos1, nosamborin'ny mpitandro filaminana ireo mpamily bisy an-jatony sy mpiasa ary maro tamin'izy ireo no nodarohana sy noterena hiasa. Nilaza ny Fanous, bilaogy iombonana iray, fa nantsoina hanatrika ny komitin'ny fitsipi-pifehezana ao amin'ny oniversite ireo mpianatra izay nanohana ity hetsika ity. Nanampy ny bilaogera fa mpiasa maro tany am-ponja no nanomboka nitokona tsy hihinan-kanina. Penlog , fikambanana ahitana bilaogera miisa 200 nangataka azy ireo mba hampahafantatra ireo fikambanana misahana ny maha-olona toy ny Amnesty International momba ny famoretana ary nangataka azy ireo hanampy amin'ny fanafahana ireo gadra.
Nandeha nankany Isiraely i Hoder, bilaogera monina ao Toronto. Hoy ny vakin'ny bilaoginy :
“One thing I have to clarify here is that my focus in this trip is only on Iran and Israel relationship and when I talk about peace, I mean between these two states. As a non-religious Iranian (which means I'm a non-Arab, just in case some people don't know that), my interest, at least in this trip, is not in issues between Arab world and Israel.
What I'm trying to primarily do here is to try to help Israelis and Iranians have a better understanding about one another and contribute to stop the dangerous process of de-humanization that both side are doing”.
“Ny zavatra tokony hazavaiko eto dia hoe ny fifandraisan'i Iran sy i Isiraely ny anton-diako ary rehefa miresaka momba ny fandriampahalemana aho dia ireo firenena roa ireo no tiako lazaina. Amin'ny maha Iraniana tsy mpivavaka ahy (izany hoe tsy Arabo aho, raha misy olona tsy mahafantatra izany), tsy ireo olana eo amin'ny tontolo Arabo sy Isiraely no maha-liana ahy, farafahakeliny tamin'ity dia ity.
Ny ezahiko voalohany indrindra atao eto dia ny hanampy ny Israeliana sy ny Iraniana hanana fifankahazoan-kevitra bebe kokoa ary handray anjara amin'ny fampitsaharana ny dingana mampidi-doza tsy araka ny maha-olombelona izay ataon'ny roa tonta ” .
Nilaza i Hoder fa nahazo fanehoan-kevitra miabo avy amin'ny Iraniana izy :
“I'm really surprised by how much my Iranian audience of the Persian blog have been quite supportive about this trip. Over 130 people have commented so far on the post I announced my decision to visit Israel and maybe less than a dozen have been negative”.
“Tena gaga aho tamin'ny habetsaky ny mpamaky Iraniana ny bilaogy Persiana izay tena nanohana ahy tamin'ity diako ity. Olona maherin'ny 130 no naneho hevitra hatramin'izao tamin'ny lahatsoratra izay nanambaràko ny fanapahan-kevitro hitsidika an'i Isiraely ary angamba latsaky ny ampolony monja no tsy nankasitraka”.
Misy ny lahatsoratra momba ny diany sy ny bilaogy Iraniana ao amin'ny Haaretz. Lisa Goldman, bilaogera, mpanao gazety sady mpikambana GV avy any Israely, nitantara ny fitsidihan'i Hoder tao amin'ny bilaoginy ihany koa .
Nanoratra momba ny dia nataon'i Hoder ny bilaogera Iraniana sasany. Mr.Behi , bilaogera monina ao Iran, nihevitra ny fihetsik'i Hoder (ao amin'ny fizarana vaovao) ho zava-baovao. FM Sokhan, bilaogera sady mpanao gazety monina ao Iran, nametraka ny sarin'i Hoder tao amin'ny bilaoginy ary nanome rohy mankany amin'ny sary sy bilaogin'i Hoder. Nilaza i Sibestan fa nanontany tena i Hoder hoe nahoana no maro ny bilaogera manohana ny diany. Nanohy izy aloha fa tsy antoko mpanaraka an'i Hoder ny bilaogera Iraniana. Ary avy eo inona ny zavatra nataon'i Hoder ho an'ireo bilaogera nogadraina? Nihevitra ny dia nankany Isiraely ho zavatra tena tsara Nikhang , bilaogera ao Toronto kanefa ny toetran'i Hoder no olana. Araka ny heviny, miova loko mora foana ary tsy tsy tsara laza i Hoder.
Nizara ny fihetsem-pon'ny Iraniana tamin'ny diany nankany Israely tamin'ny 2003 i Shaharm Kholdi , bilaogera monina any amin'ny Fanjakana Britanika:
“To many of these Iranians in Toronto, I was absolutely clear as to why I was going to Jerusalem, as it was a workshop/course which was to be considered as a full credit, and for which I was to write an essay and be graded accordingly. The trip was funded by the University of Toronto's Political Science Department and the Canadian Friends of Hebrew University of Jerusalem's Foundation in TorontoHowever, and despite this full transparency, the great Iranians of the University of Toronto consider a person who supports a two-state solution, like myself, for the respective conflict, a collaborator and a Zionist. Coupling that with my S'Can-Iranic attitude, perhaps I am the worst kind of political cultural species for many of them”.
“Ho an'ireo Iraniana marobe tao Toronto, tena nazava tsara ny antony nandehanako tany Jerosalema, satria nisy atrikasa/fandaharam-potoana izay azo itokisana tanteraka, ary tokony hanoratako lahatsoratra sy omena lanja noho izany. Nahazo fanohanana avy amin'ny Departemantan'ny Siansa Politika ao amin'ny Oniversiten'i Toronto sy ireo Namana Kanadiana ao amin'ny Oniversite Hebreo ao amin'ny Orina Mpanasoa Jerosalema ao Toronto ny dia, ary na dia eo aza ny fangaraharana feno, dia mametraka ny olona izay manohana ny vahaolan'ny fanjakana roa, tahaka ny tenako, ho mpiray tsikombakomba sy Sionista ireo Iraniana lehibe ao amin'ny Oniversiten'i Toronto. Raha ampifandraisiko miaraka amin'ny toe-tsaiko Iranika izany dia angamba izaho no karazana kolontsaina politika ratsy indrindra ho an'ny maro amin'izy ireo ” .
Zavatra iray no azo antoka: Rehefa manaraka ny bilaogy sy ny bilaogera Iraniana ianao dia tsy ho sasatra mihitsy. Sady manana vaovao ianao no manana mpamoaka vaovao !